နတ်​သက်​​ကြွေလာတာလား အထင်​မှားရ​လောက်​တဲ့ စံရတီမိုးမြင့်​ရဲ့ ​ပုံရိပ်​​တွေ - 9style
မိန်းကေ​လး တစ်​​ယောက်​မှာ ရှိသင့်​တဲ့ အလှတရား​တွေ ပြည့်​နှက်​​နေတဲ့ လှပတဲ့ ပန်းပွင့်​​လေး​ စံရတီမိုးမြင့်​က​တော့ သူမရဲ့အလှအပ​တွေ​ကြောင့်​ ပရိသတ်​​တွေရဲ့အချစ်​ကို တစ်​​နေ့တစ်​ခြား တိုးတိုးပြီး ရလာသူ​လေးပါ။ လတ်​တ​လောမှာ​တော့ စံရတီမိုးမြင့်​က ပန်း​ရောင်​အကျီင်္​လေးနဲ့ လှချင်​တိုင်းလှ​နေတဲ့ သူမရဲ့ အလှပုံရိပ်​​လေး​တွေကို လူမှုကွန်​ယက်​မှာ ​ဝေမျှ​ပေးထားတာ ​တွေ့ရပါတယ်​။ ​သေချာ​စေ့​စေ့ကြည့်​​လေ လှရက်​လွန်း​လေဖြစ်​တဲ့ သဲရဲ့ပုံရိပ်​​လေး​တွေက​တော့ လက်​ရာ​မြောက်​တဲ့ ပန်းချီကားတစ်​ချပ်​နှယ်​ပါပဲ​နော်​။
မိုမို​လေးချစ်​ပရိသတ်​​တွေ​အတွက်​ တစ်​​နေ့တစ်​ခြား အလှ​တွေတိုတိုးလာတဲ့ စံရတီမိုးမြင့်​​လေးရဲ့ ပွဲတက်​ပုံရိပ်​​တွေကို ​ဖော်​ပြ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​။
စံရတီမိုးမြင့်​က​တော့ “အဝေးကပဲမင်းကိုငါလေ…. 🌸🦋” ဆိုပြီး သူမရဲ့အလှပုံရိပ်​​တွေကို လူမှုကွန်​ယက်​မှာ တင်​ထားတာပါ။
မင်းသမီး​ချော​လေး စံရတီမိုးမြင့်​က​တော့ လတ်​တ​လောမှာ ပွဲ​တွေ ဆက်​တိုက်​တက်​ဖြစ်​​နေပြီး အနုပညာလှုပ်​ရှားမှု​တွေလည်း ဆက်​တိုက်​ပြုလုပ်​ဖြစ်​​နေတာပါ။ ပရိသတ်​​တွေစိတ်​ဝင်​စား​နေကြတဲ့ စံရတီမိုးမြင့်​ရဲ့ အချစ်​​ရေးက​တော့ ငြိမ်​သက်​​နေပြီး၊ အိမ်​​ထောင်​ဖက်​ကိုလည်း ​သေချာစဉ်းစား​ရွေးချယ်​သွားမှာပါလို့ အင်​တာဗျူး​တွေမှာ ​ဖြေဆိုထားပါ​သေးတယ်​။ မိုမို​လေးချစ်​ပရိသတ်​​တွေလည်း လှရက်​လွန်းတဲ့ နတ်​မိမယ်​​လေး စံရတီမိုးမြင့်​ကိုချစ်​ရင်​ သူမရဲ့ပုံ​လေး​တွေကို ​ဝေမျှသွားကြပါဦး​နော်​။
Source:San Yati Moe Myint’s Fscebook , Photo: Ria Bo Vich , Credit : MOMOLAY
မိနျးကလေး တဈယောကျမှာ ရှိသငျ့တဲ့ အလှတရားတှေ ပွညျ့နှကျနတေဲ့ လှပတဲ့ ပနျးပှငျ့လေး စံရတီမိုးမွငျ့ကတော့ သူမရဲ့အလှအပတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့အခဈြကို တဈနတေ့ဈခွား တိုးတိုးပွီး ရလာသူလေးပါ။ လတျတလောမှာတော့ စံရတီမိုးမွငျ့က ပနျးရောငျအကြီင်္လေးနဲ့ လှခငျြတိုငျးလှနတေဲ့ သူမရဲ့ အလှပုံရိပျလေးတှကေို လူမှုကှနျယကျမှာ ဝမြှေပေးထားတာ တှရေ့ပါတယျ။ သခြောစစေ့ကွေ့ညျ့လေ လှရကျလှနျးလဖွေဈတဲ့ သဲရဲ့ပုံရိပျလေးတှကေတော့ လကျရာမွောကျတဲ့ ပနျးခြီကားတဈခပျြနှယျပါပဲနျော။
မိုမိုလေးခဈြပရိသတျတှအေတှကျ တဈနတေ့ဈခွား အလှတှတေိုတိုးလာတဲ့ စံရတီမိုးမွငျ့လေးရဲ့ ပှဲတကျပုံရိပျတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
စံရတီမိုးမွငျ့ကတော့ “အဝေးကပဲမငျးကိုငါလေ…. 🌸🦋” ဆိုပွီး သူမရဲ့အလှပုံရိပျတှကေို လူမှုကှနျယကျမှာ တငျထားတာပါ။
လှရကျလိုကျတာ သဲရယျ…မငျးသမီးခြောလေး စံရတီမိုးမွငျ့ကတော့ လတျတလောမှာ ပှဲတှေ ဆကျတိုကျတကျဖွဈနပွေီး အနုပညာလှုပျရှားမှုတှလေညျး ဆကျတိုကျပွုလုပျဖွဈနတောပါ။ ပရိသတျတှစေိတျဝငျစားနကွေတဲ့ စံရတီမိုးမွငျ့ရဲ့ အခဈြရေးကတော့ ငွိမျသကျနပွေီး၊ အိမျထောငျဖကျကိုလညျး သခြောစဉျးစားရှေးခယျြသှားမှာပါလို့ အငျတာဗြူးတှမှော ဖွဆေိုထားပါသေးတယျ။ မိုမိုလေးခဈြပရိသတျတှလေညျး လှရကျလှနျးတဲ့ နတျမိမယျလေး စံရတီမိုးမွငျ့ကိုခဈြရငျ သူမရဲ့ပုံလေးတှကေို ဝမြှေသှားကွပါဦးနျော။